Christina Ricci သည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Addams အဖြစ် iHorror ၏ နောက်ကွယ်မှ ဖျော်ဖြေရေးခရီးစဉ်ကို ပေးသည်။
ပင်မစာမျက်နှာ	ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း	Christina Ricci သည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် Addams အဖြစ် နောက်ကွယ်မှ ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်ကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Christina Ricci သည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် Addams အဖြစ် နောက်ကွယ်မှ ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်ကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
by အန်သိုနီ Pernicka မေလ 4, 2022
by အန်သိုနီ Pernicka မေလ 4, 2022 14,010 အမြင်များ
အဲဒါကို ကျနော်တို့ကပဲ ကြေညာတယ်။ Christina Ricci ဟာ ရိုက်ကူးရေးတွေ ပြီးသွားပါပြီ။ နောက်လာမည့် ဇာတ်ကားတွင် သူမ၏ အခန်းကဏ္ဍ Tim Burton Netflix စီးရီးကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့. Ricci သည် ကျွန်ုပ်တို့အလွန်နှစ်သက်သော ဝမ်းနည်းဖွယ်လူငယ်တစ်ဦးအဖြစ် သူမ၏အခန်းကဏ္ဍကို ပြန်လည်တုံ့ပြန်မည်မဟုတ်သော်လည်း သူမသရုပ်ဆောင်နေသည့် အခန်းကဏ္ဍကို ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားမိပေမည်။
ယမန်နှစ်က ကျွန်ုပ်တို့ သတင်းပို့ခဲ့သည့်အတိုင်း Tim Burton သည် မျက်စိကျနေကြောင်း ကောလာဟလများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ Ricci သည် Morticia အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ရန်!
Netflix ရှိုးအသစ်အတွက် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ရန် သေချာသည့် ပရိုမိုးရှင်းဓာတ်ပုံများကို ကြည့်ရှုရန် မစောင့်နိုင်တော့ပါ။ အထက်ဖော်ပြပါဓာတ်ပုံသည် စီးရီးသစ်မှမဟုတ်သော်လည်း၊ အမှန်တကယ်တွင် သူမသည် Morticia အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ပါက Ricci မည်သို့မည်ပုံရှိမည်ကို အကြံဥာဏ်ပေးသည်။
Christina Ricci သည် Addams ၏ကမ္ဘာသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခြင်းအကြောင်းဤပြောဆိုချက်အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်၏လွမ်းဆွတ်ဖွယ်ခံစားချက်များအပြည့်ရှိသည်။ ဒါကြောင့် 1993 ခုနှစ် Ricci က လူငယ်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဒီဗီဒီယိုလေးကို Addams မိသားစုအိမ်ကြီးကို လည်ပတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အခါ မျှဝေလိုက်ရပါတယ် ။
ET သည် 1993 ခုနှစ်တွင် 'Addams Family Values' အစုအဝေးသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး Christina Ricci သည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် Addams အဖြစ် ဇာတ်ကောင်၏ နောက်ကွယ်မှ ဖျော်ဖြေရေးခရီးစဉ်ကို ပေးခဲ့သည်။ Ricci သည် ကျွန်ုပ်တို့အား Addams Mansion အတွင်းသို့ ခေါ်ဆောင်သွားပြီး သူမနှင့် Pugsly တို့သည် များသောအားဖြင့် ပြဿနာတက်နေသည့်နေရာကို ထောက်ပြသည်။
bookmark iHorror.com ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤပရောဂျက်တွင် ရရှိသည့် အချက်အလက်အသစ်များကို သေချာပေါက် တင်ပေးသွားပါမည်။